Nyanzvi Munyaya Dzehupfumi Dzozeya Dambudziko Rekushaya Mari
Zvita 28, 2007
Bhanga guru renyika reRBZ, iro rinofanirwa kunge riri dura remari yenyika, rinotiwo basa raro rekuchengeta mari ratorwa nevari kuita zvehuwori nemari, avo vave kuichengetera mudzimba dzavo.
Vemabhizinesi vari kunziwo vari kuwedzera dambudziko iri nekupindawo muhuwori hwemari, uye kuchaja mari kune vatengi vanenge vachida kutenga zvinhu nemacheki.
RBZ yakatora matanho ekuedza kugadzirisa dambudziko iri nekuisa mamwe mabearer cheque matsva ane hudzamu hunotangira pa$250 000.00, $500 000.00 uye$750 000.00, asi dambudziko iri rinenge rakatowedzera. Veruzhinji vakatambira zororo rekirisimasi vari mumitsetse pamabhanga, vachizama kuti vawane twumari twekushandisa pazororo, zvinowe zvakakundikana.
Mukuedza kuona kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri, Jonga Kandemiiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzehupfumi, Amai Marah Hativagone, avo vanotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce, pamwe naVaComfort Muchekeza.
Amai Hativagone naVaMuchekeza vaudza Jonga Kandemiiri kuti dambudziko iri riri kukonzerwa nehurongwa hwakaiswa nebhanga guru reRBZ hwekuedza kugadzirisa hupfumi hwenyika pasina kuiswa nzira dzakatsarukana dzekuita izvi.